Wararka Caalamka | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 3
Home facebook.com Wararka Caalamka Page 3
Dublamaasigii Mareykanka u Qaabilsanaa Geeska Africa oo Shaqada isaga Tageya/waa Maxey Sababtu?.
Ergayga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa lagu soo waramayaa inuu xilka ka tagayo iyadoo gobolka ay hareeyeen qalalaaso siyaasadeed iyo kuwo bini’aadantinimo. David Satterfield ayaa xilka iska casilaya saddex bilood uun ka dib magacaabistiisa, sida laga soo xigtay saraakiil aan la magacaabin oo la hadlay majaladda...
R/wasaaraha Dalka UK Bores Johnson iyo Wasiirkiisa Maaliyadda oo Markii Ugu Horeysay Abid Boolisku Ganaaxeen.
Booliiska Ingriiska ee Metropolitan Police ayaa ganaaxay raysalwasaaraha UK Boris Johnson iyo wasiirkiisa maaliyadda Rishi Sunak kadib markii ay jabiyeen shuruucdii xanibaada ay isla dowladdiisa soo rogtay xanuunka COVID-19 awgiis. Xafladaha lagu eedeeyay inay ka qeybgaleen raysalwasaaraha iyo Wasiirkiisa maaliyadda ayaa la qabtay xilligii ay jirtay xayiraada COVID-19 kuwaas...
Gudiga Midawga Africa oo Ku Gacan Sayray Go’aankii Xukuumada Soomaaliya ay ku Eriday Danjire Francisco Madeira.
Guddiga Midowga Afrika ayaa walaac weyn ka muujiyay War-Saxaafadeed dhawaan ka soo baxay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, kaasoo ku aadanaa eryida Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Caetano Madeira. Guddoomiyaha midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, ayaa muujiyay inay kasoo horjeedaan eryida wakiilkooda, isagoo sheegay inay xushmaynayaan warqadda madaxweyne Farmaajo...
Maxkamadda Sare ee Dalka Ethiopia oo U Yeertay Hoggaanka Sare ee TPLF ee Dagaalku Kala Dhexeeyo.
Maxkamadda sare ee Itoobiya qaybta la dagaalanka Argagaxisada, ayaa xeer ilaalinta heer federal ee Itoobiya ku amartay inay maxkamadda hor keenaan Hoggaamiyaha TPLF Debretsion, Afhayeenka TPLF Getachow Reda iyo xubno kale oo kamid ah kooxda TPLF. Dowladda ayaa sidoo kale ugu baaqday xubnahaasi kamid ah TPLF inay iska soo xaadiriyaan...
Isaaq Cabdi Maxamed oo Loo Doortay Xubin Golaha Deegaanka Barron ee Dalka Mareykanka.
Isaaq Cabdi Maxamed ayaa loo doortay xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Barron ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. 37-jirkan ayaa 179 cod ka helay doorashadii Talaadadii, isagoo ka adkaaday Maureen "Mo" Tollman oo horay ugu fadhiyay kursiga, isla markaana doonayay in mar kale la doorto. Maureen "Mo" Tollman ayaa...
Dilkii Wariye Jamaal Kashogi oo Dalka Turkigu Go’aan Lamafilaan ah Ka Gaarey/waa Nuucee Go’aanka Turkigu Qaateen?.
Dowladda Turkiga ayaa go’aan cusub oo dad badan lama filaan ku noqday ka qaadatay kiiska dilka Wariyihii u dhashay boqortooyada Sacuudiga ee sida arxan darada ahaa loogu dhax dilay gudaha Qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbuul. Turkiga ayaa horey dacwad ugu soo oogay 26 eedeesane oo u dhashay Sucuudiga, waxaana...
Dawladaha Daneeya Arrimaha Soomaaliya oo Qaramada Midoobey Ugu Baaqdey in aan Dhaqaalaha ay Bixin jireen La Goyn.
Xaaladda xuquuqul insaanka ee Soomaaliya ayaa si weyn isha loogu wada hayay todobaadkii la soo dhaafay iyadoo ay booqashadeedii ugu horreysay ku tagtay Khabiir madax-banaan oo Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimahan. Isha Dyfan, waxay sheegtay inay kusoo aragtay Soomaaliya horumar iyo caqabado, iyadoo sidoo kale ku baaqday in la kordhiyo...
DAAWO: Wafdi ka Socda Dalka Jabuuti oo Soo Gaadhey Magaalada Hargeysa ee Xarunta Somaliland.
Wafti ka socda dowlada Jabuuti oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Siciid Nuux, oo safar ku yimid Hargaysa, ayaa booqday suuqa Waaheen ee dabku burburiyay. Waftiga ayaa Hargaysa u yimid si ay shacbiga Somaliland ugu muujiyaan dareen walaalnimo iyo garab istaag wakhtigan adag, iyaga oo sheegay in ay gacan...
Dabkii Ka Qarxey Suuqa Waaheen ee Hargeysa oo R/wasaaraha Dalka Ingiriisku Tiiraanyo Ka Muujiyey.
Raysal Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson, ayaa sheegay in uu aad uga murugooday dabka galaaftay suuqii ugu waynaa Somaliland ee Waaheen, isagoo sheegay in dowlada Ingriisku gacan ka gaysan doonto dib u dhiskiisa. Raysal wasaaraha ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitterka ku sheegay in ay murugo galisay in uu arko...
2nd Cold War Breeze whistling into Spring 2022 -Lewiston Sun Journal.